Banyere anyị - Aja mgbapụta, sump mgbapụta, ajịrịja nkume mgbapụta Manufacturer
JP Metal & Equipment Co., Ltd tọrọ ntọala na 2006, bụ a nnukwu ọkachamara elu-tech ulo oru mgbapụta emeputa aku na-eme nnyocha na exporting slurry mgbapụta, eyi na corrosion na-eguzogide ọgwụ ihe na OEM nhazi. JP mgbapụta otu ekpuchi karịa 40000 square mita, na aha obodo bụ 18 nde yuan. N'ime afọ na ike ike na ndị mmadụ na-agba mbọ echiche, anyị banye a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu-edu management na teknuzu talent. Ẹdude mkpara bụ karịa 220 ndị mmadụ, nke onye 30% bụ ọkachamara. E wezụga, JP mgbapụta e aha dị ka n'ógbè elu ama ika na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ ume. Emejuputa ISO9001: 2008 quality management usoro, JP mgbapụta e ọdịda aha Hebei ike ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe enterprise. Na aka iso mmụba nke ọnụ ọgụgụ, anyị ụlọ ọrụ aghọwo ndị kasị ibu slurry mgbapụta ọkọnọ isi na otu ụlọ ọrụ na Shijiazhuang.
JP mgbapụta nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ na mmepe na ngwa nke slurry mgbapụta. Dabere na-ewebata na-adọrọ mba ọzọ elu uzu, ngwaahịa usoro nke zuru okè arụmọrụ ma mkpuchi a kpụrụ. Ugbu a, isi ngwaahịa na-agụnye usoro nke slurry mgbapụta, FGD engineering pụrụ iche mgbapụta, gravel mgbapụta, dredging mgbapụta, froth mgbapụta, chemical mgbapụta na e mepụtara ọhụrụ Pu roba. Ọtụtụ narị ụdị, ọtụtụ-eji na Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, coal ịsa, electric ike, flue gas desulfurization, dredging, mmiri engineering, mmanụ ala na chemical ụlọ ọrụ, ọchịchị ochichi, gburugburu ebe obibi-echebe, nsị ọgwụgwọ na ndị ọzọ ọrụ.
Anyị mmepụta ebe-ekpuchi ebe ndị 24000 square mita, ngụkọta mmepụta ike nke-eme kwa afọ mmepụta bụ 10000 nkeji (tent), na-eme kwa afọ mmepụta nile di iche iche nke elu chromium alloy oge ọgbụgba na-2000 tons.The mmepụta ebe a na-ekewa n'ime ise distrikti otu ebe na abụọ emmepe, ya bụ ebu mgbatị, okpomọkụ omume, ezi machining, ịmụta ịgbado ọkụ na nzukọ mkpuchi nke ise mmepụta ebe; okokụre akụkụ ahụ mapụtara; quality analysis na mmiri nnwale. Isi ihe nke na ngwaahịa: A05, A49, A33, A51 na ndị ọzọ na elu chromium ọcha nkedo ígwè.
Mmepe nke ngwaahịa imewe na usoro nkwadebe adopts CFD na CAPP technology. The ule ziri ezi nke adịghị ọcha elu nsogbu ule ebe dị ruo ISO9906 larịị nkenke, na-akwado a dịgasị iche iche nke elu-nkenke ule ngwá, gbasara nyocha ngwá na on.All mgbatị ịmụta phenolic na ịkpụzi. Ka ọ dịgodị iji melite ogo nke slurry mgbapụta usoro, JP mgbapụta ewebata ọhụrụ technology nke furu efu ụfụfụ nkedo. Iji a Usoro, n'elu roughness mgbatị nwere ike iru Ra3.2 ka 12.5μm; nkedo size nwere ike iru CT7 ka 9; na machining ohere maka a kacha bụ 1.5 ka 2mm. The mgbatị enweghị flash, burr na draft, nke na-akwado ihe na anya nke slurry mgbapụta akụkụ. Onwem na 1 tọn, 2 tọn, 5 tọn n'etiti ugboro oku, anyị nwere ike Nlụpụta 8-10 tọn nēfe ozugbo oge. Okpomọkụ omume ogbako akwadebe na abụọ 20 cubic eguzogide-ụdị okpomọkụ omume ọkụ. Ọtụtụ n'ime ndị igwe ngwaọrụ bụ CNC na machining ogbako, na e nwere 4.2M na 4.5M vetikal lathe na ihe karịrị 20 nkeji igwe ngwaọrụ. Ke adianade do, e nwere ndị dị iche iche na iche nke hoisting ngwá, metal ọnwụ na ịgbado ọkụ ngwá, impeller larịị n'iji ya gee ntị na ngwá, ịkpụzi ngwá, sandblasting polishing akụrụngwa iji hụ na mmepụta ikike.
JP mgbapụta n'ụzọ zuru ezu implements na ISO9001 management usoro ma na-edebe usoro nnyocha. Quality nnyocha ndia bu dị na niile mmepụta n'ibu. Professional ngwá gụnyere spectrometer, metallographic analyzer, oghom detector, n'ibu ule igwe (nje, mmetụta, ekweghị ekwe), magnetik flowmeter, nrụgide nlele, ammeter, vibration mita, mkpọtụ mita, haịdrọlik ibuo usoro nke ọkachamara software. Zuru okè nchọpụta emesi àgwà nke akụrụngwa iji hụ na onye ọ bụla nfuli na akụkụ bụ n'ụzọ zuru ezu na akara na ihe ndị a chọrọ.
JP mgbapụta ahụ agbasawo niile anụ ụlọ ahịa na China n'elu 30 anāchi achi na obodo. Ọzọkwa e ọma ji na 20 mba na uwa .Nke mbụ akara mkpara nwere ọkachamara ahụmahụ na-enye ọrụ n'ihi na ndị ahịa. Nga ire ọrụ: jikọtara na n'ezie na-arụ ọrụ ọnọdụ, anyị nwere ike inye ize ọrụ na ezi uche kasị imewe plan. Na ire ọrụ: ahịa-dabeere, anyị na-enye nnyocha, na-elekọta na mgbanwe nke imewe plan. Mgbe-ire ọrụ: anyị na-enye keukwu ọrụ gụnyere echichi na nyere ngwá, pesonel ọzụzụ, akụkụ ahụ mapụtara ọkọnọ na ndị ọzọ ọrụ.
Enterprise development echiche :
N'ihi na ụlọ ọrụ: ndị mmadụ na-agba mbọ
N'ihi na ngwaahịa: dị ka ihe siri ike dị ka nkume
N'ihi na ahịa: oru oma ọhụrụ
N'ihi na ahịa: anọgide
JP mgbapụta e ana-eguzosi ike n'ezi, ọhụrụ, arụmọrụ, imekọ ihe ọnụ na mmụọ nsọ na "ike uru maka ahịa" azụmahịa na nkà ihe ọmụma. welcome enyi ileta factory na-atụ anya na-arụ ọrụ ka gị ike a mma n'ọdịnihu.